Biyo cabista → Biyo la cabo • Biyo la cabbo
Biyo cabitaanka dhalada biyaha
Waxaan bixinaa cabitaanno biyo cabbaya oo wax baranaya, warshadda HoReCa, daryeelka caafimaadka, guriga, xafiisyada, xarumaha dadweynaha, jardiinooyinka, xarumaha isboortiga iyo kuwa kale oo badan.
Download buugga >>
Xaqiijinta tayada biyo la cabbo waa mowduucyada dadaallada badan ee hay'adaha iyo soosaarayaasha nidaamyo gaar ah oo loo adeegsaday daaweynta biyaha.
Ha miirayn biyaha. Nadiifi iyada! Waxaan u soo bandhigeynaa tikniyoolajiyadda kacaanka ee laambadda UV-da ee loogu talagalay jeermiska biyaha ee Acuva. Waxaan nahay qeybiyaha ugu horeeya ee qaaska ah Yurub!
Biyo cabitaanku waa inay ka xor yihiin dhammaan waxyaabaha kujira microgenganisms iyo microelements-ka waxyeelada leh waana inay lahaadaan dhadhanka saxda ah.
Biyo tayo leh oo la cabo waxay hubisaa qaabeynta saxda ah, dhismaha iyo adeegsiga nidaamka biyaha iyo bullaacadaha dhisme ama barxadda magaalada, iyo ka fogaanshaha biyo-xireenka, heerkulka aan ka badnayn 25 ° C.
Biyo cabitaanka ilo biyo ah
Haddii ay jirto baahi loo qabo in la helo biyo la cabo dad fara badan, waxaa habboon in laga fiirsado xalka cusub oo aamin ah, sida ilaha biyaha laga cabo.
Aalkolada caynkaas ah waa aaladaha nadaafadda iyo fudud ee loo istcimaalo oo bixiya biyo qabow ama heer kulka qolka waxayna ku habboon yihiin meelaha ay dad badani isticmaalaan. Xalkan waxaa inbadan loo adeegsaday wadamo kale waana kufiican xafiisyada, iskuulada, warshadaha warshadaha, xarumaha tareenka iyo gegada diyaaradaha, i.e. meelkastoo baahi jirto in biyo biyo la cabbo la siiyo kooxaha waawayn ee dadka.
Marka laga hadlayo cudurka faafa ee COVID-19, waxaan la yaabanahay sida, iyadoo la raacayo tilmaamaha Sanepid iyo daryeelka caafimaadka dadka, loo xalliyo dhibaatada lagu qanco haraadka dadka ku nool magaalooyinka iyo xarumaha dowladda hab hab amaan ah.
Eeg sidoo kale: Saldhigyada jeermiska lagu daarto iyo Nidaamyada qaladka ah ee lagu nadiifiyo qolalka iyadoo la adeegsanayo habka ceeryaanta qallalan
Markaan raadineyno aalad sahlan oo nadaafad leh in la adeegsado, oo aynan doorbideynin gacmo-la'aan, shirkadaha soo saaraya cabitaanka iyo ilaha biyaha la cabbo waxay noo yimaadaan xalka, isticmaalka kaas oo hubiya nadaafadda ugu badan.
Markaad dooranayso isha biyaha la cabo ee guga si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay in la xuso
Waxaan u qaadaneynaa, dabcan, taas biyo ka soo baxa tuubooyinkayaga waa tayo aad u wanaagsan, oo si fudud lagu go'aamin karo iyadoo la dalbado baaritaano habboon in lagu sameeyo rugta nadaafadda iyo cudurrada faafa ee ugu dhow. Haddii ay caddaato in kaayagii biyaha tuubada waxay leedahay tayo sare, ilo biyood cabitaan ayaa la isticmaali karaa.
kuwan cabbayaasha sidoo kale loo yaqaan booyadaha biyaha, waa aalad ogolaaneysa adeegsiga biyo nadiif ah, biyo qabow oo aan ubaahnayn saxamada. Biyo nadiif ah oo caafimaad leh ayaa markaa loo heli karaa wakhti kasta, tiro badan iyo qof walba.
Biyo la cabbo Waxaa si guul leh loogu isticmaali karaa iskuulada, xanaanada, meelaha shaqada, xafiisyada iyo dhamaan meelaha kale ee dadweynaha, halkaas oo macaamiisha iyo martida, ardayda iyo shaqaalaha badiyaa ay ubaahanyihiin inay ka harraadiyaan harraad.
Markaad dooraneyso isha saxda ah ee biyaha la cabbo, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid muuqaalka aaladda, laakiin sidoo kale shaqadeeda.
Aalkolada taagan ee joogsada waxay ka sii shaqeyn doonaan in ka badan hal meel, iskuna sudhaan kuwa kale. Mararka qaarkood nadaamka qaboojinta biyaha looma baahna. Qaar ka mid ah ilaha biyaha la cabbo waxaa ku qalabeysan tuubooyin dheeri ah oo fududeeya buuxinta tusaale ahaan dhalo. Biyo cabitaanka waxaa lagu dhaqaajin karaa lugo lug ah, badhan ama sawir. Qalabka qaar ayaa sidoo kale lagu rakibay miirayaasha biyaha.
Faa'iidada aan la hubin ee laga helayo ilaha biyaha la cabbo ayaa ah suurtagalnimada in lagu xiro nidaamka biyaha iyo isticmaalka biyo socda, taas oo ka dhigeysa dhibaatada kicinta dhalooyinka biyaha gabi ahaanba waa baaba'aan, isticmaalkuna waa nadaafad iyo caafimaad, iyadoo aan la isticmaalin koobabka caagga ah.
Biyo cabitaanka ayaa laga sameeyay biraha galvanized, budo lagu daboolay badhanka naxaasta ah.
Taargooyinka hore iyo gadaalba waxay ka samaysan yihiin bir birta ka samaysan ama bir bir adag ama bir daxalan. Dahabku wuxuu ka samaysan yahay bir bir lagu dubay.
Biyo cabitaanka ayaa waliba la dhammaystiray iyaga oo leh astaan ​​loo yaqaan 'laser cut logo' oo caado u ah.
casriga ah isbeddellada ku dhaca dhismaha waxay ku qasbaan soosaarayaasha ilo biyood biyo la cabo inay fuliyaan mashaariic ku habboon qaabka hadda jira iyo adeegsiga agabyo gaar ah iyo naqshad casri ah alaabahooda. Soo bandhiggu wuxuu ka kooban yahay labadaba alaabooyin leh naqshad caadi ah iyo sidoo kale qaab minimis ah.
Biyo la cabbo ayaa sidoo kale loogu talagalay meelaha ay ka midka yihiin jardiinooyinka, garoomada lagu cayaaro iyo jardiinooyinka.
maanta ilo biyood Sidaa darteed, waxay si guul leh u gudan karaan ma aha oo keliya shaqooyinka qurxinta, qurxinta meel bannaan, laakiin waxay sidoo kale bixin karaan biyo cabbitaan tayo sare leh.
Moodooyinka qaarkood cabbayaasha sidoo kale waxaa loogu talagalay xayawaanka.
Biyo la cabo waxay kaalmaynaysaa daryeelka deegaanka dabiiciga iyadoo la yareynayo qashinka qashinku ka soo baxo marka la cabbo biyaha dhalada ah ama marka la isticmaalayo koobabka caagga ah.
Ilaha biyaha la cabbo ee la soo bandhigo waxay ku habboon yihiin in lagu isticmaalo qolalka xidhan iyo waliba bannaanka. Aaladaha waxay ka samaysan yihiin agab tayo sare leh dhismahoodu wuxuu u oggolaanayaa adeegsiga dareen, nadaafadeed iyo raaxo leh.
Aaladda qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad biyo ka hesho heerkulka qolka, qabow, dhalaalaya iyo waliba kuleyl. Waa xalka ugu habboon ee loo shaqeeyayaasha si fudud u siin kara shaqaalaha helitaanka biyo nadiif ah oo la cabo.
Bixiyeyaasha Biyo-Wejiga Pro-Stream. Qabow, kulul iyo biyo kulul. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg halkan
Biyo la cabbo oo ka soo ifbaxaya bannaanka magaalada ayaa u oggolaanaya dhiirrigelinta hab-nololeedka dabiiciga ah iyo kobcinta caadooyinka cunnada caafimaadka leh, gaar ahaan marka ay tahay nadaafadda iyo isticmaalka biyo nadiif ah oo nadiif ah.
Biyo la cabbo waa kuwo shaqeynaya, adkaysi u leh waxyeellada iyo fududaanta adeegsiga.
Qaar ka mid ah ilaha biyaha la cabo ee loo isticmaalo bannaanka dibedda ayaa laga hawlgelin karaa sannadka oo dhan iyadoo la adeegsanayo tuubbooyinka khafiifka ah ee ka hortagga qaboojinta.
Ilaha biyaha ee casriga la cabbo - ilaha ilkuhu way fududahay in la isticmaalo taas oo carruurta iyo waayeelkuba u isticmaali karaan si fudud, sidoo kale waxay uga mahadcelinayaan la qabsashada cabbitaanka khamriga ee dhererka qofka isticmaalaya aaladda.
Qalabka guga biyahaisha la taaban karo ee beertadhismaha ishahaddii biyaha tuubada la isticmaali karohaddii biyaha laga keenay isha caafimaad qabaanfilter garee cabitaankabeerta cas Cascar ishaisha biyahaisha la taaban karo ee beertaqiimaha isha biyahaisha biyaha ee carruurtaisha weyn ee beertaisha isha sida loo sameeyoisha dhirta beerta dhagaxisha yar ee beertail biyood casri ahjardiinada beerta gadaal laga gooyosoo saaraha isha beertasawirka isha biyahaisha derbiga beertaisha biyaha ee jardiinada graniteisha dhirta beerta dhagaxtuubbo loogu talagalay cabbiyeisha yar ee beertadadka magaalada cabbailo wabiyaal warsawisha yar ee beertail biyood casri ahpitnikibarkado biyocabbayaashacabitaanka carruurtadadka cabba carruurta ku nool dugsiyadadadka cabbacabbayaasha eeyahadadka cabba dugsiyadadaboolka cabitaankaku cabba beeraha dhexdoodacabdi warsawbamka cabitaankaisha qorraxda qorraxdaBiyo la Caan qaadi karoheerarka biyaha la cabbobiyaha la cabbo ee Polandcabitaanka biyaha warsawshuruudaha biyaha la cabbobiyaha gugabiyuhu way ka daadanayaan kuwa cabbailaha biyahabiyaha tuubbada dibeddabiyo nadiif ahgugail biyo ah oo la caboilo biyoodilo ku yaal beertaguga iskuuladailaha biyahaisha biyaha la caboqiimaha biyaha guga biyahabiyaha la cabo ee guga dugsiyada
La soco warar kale:
Qalabka loogu talagalay gaaska biyaha
Bixiye cadaadiska biyaha
Biyo jilcinta biyaha
Dib uga laabasho osmosis